Androany amin'ny Apps Camera Amazing Spy ho an'ny Android | Androidsis
Mbola te hanomboka ny herinandro indray aho Androidsis miaraka amin'ny fizarana Fampiharana mahavariana ho an'ny Android, ary amin'ity indray mitoraka ity dia te-hampiseho rindranasa fakantsary ho an'ny terminal Android misy somary hafa noho ireo fakantsary azontsika jerena ao amin'ny Google Play Store.
Spy Camera Os no anaran'ny fampiharana ary araka ny anarany dia manamarina fa tena izy fakantsary mpitsikilo izany dia hahafahantsika maka sary nefa tsy misy olona eo amin'ny tontolo iainantsika mahatsikaritra fa manao izany isika.
1 Inona no atolotry ny Spy Camera (Spy Camera OS) antsika?
2 Fantsona voasedra
Inona no atolotry ny Spy Camera antsika (Spy Camera OS)?
Cam mpitsikilo o Spy Camera OS izay no anarana ofisialin'ny fampiharana izay hitantsika ny fivarotana app google, dia iray amin'izany Fampiharana mahavariana ho an'ny Android izany dia hahafahantsika maka sary amin'ny fotoana rehetra na amin'ny toe-javatra tsy misy ny tontolo iainana izay ahatsapantsika izay ataontsika.
Miorina amin'ny tetikasan'ny loharano misokatra ho an'ny Android ary manolotra anay ireto fiasa manaraka ireto:
Miorina amin'ny ideolojia rindrambaiko maimaim-poana.
Fampiharana mavesatra ambany.
Fomba fisamborana haingana sy mangina.
Mety amin'ny fakantsary anoloana sy aoriana.
Fampandehanana fiara mandeha amina toerana fanemorana
Famantarana ny tarehy.
Fampisehoana mainty mba hampisehoana fa maty ny fitaovana.
Kitiho raha hametahana.
Afeno na asehoy ny fampirimana Gallery.
Ny fandraisam-peo video amin'ny maody fanandramana ihany.
Fahafahana mitahiry ireo sary azo ao anaty fahatsiarovana anatiny na ivelany an'ny fitaovana.
Widget an'ny desktop ho fisamborana haingana.
Ity fampiharana manaitra ho an'ny Android ity dia tokony hiasa amin'ny ankamaroan'ny terminal Android satria mila izany fotsiny Android 2.2 na kinova ambonimbony kokoa.
Ahoana ny Cam mpitsikilo? Heverinao ve fa fampiharana mahasoa izy io? Inona no fampiasana omenao azy?
En Androidsis Tianay ny hahafantatra ny hevitrao momba izay rehetra hita ao amin'ny bilaogy, ka mandrosoa ary ampiasao ireo hevitra ary manehoo malalaka ny hevitray
Fanazavana fanampiny - Fampiharana tsy mampino ho an'ny Android: Androany WhatsApp ivelan'ny Internet
Sintomy - Camera Spy OS
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » fiarovana » Fampiharana Android mahatalanjona: fakan-tsary mpitsikilo
Azoko tsara fa ny tanjon'ny bilaogy tokana dia ny mitazona lahatsoratra toa ny churros hametraka tsara, fa afaka manandrana adjectif hafa izay tsy mampino sy manaitra.
xabier dia hoy izy:
Ny fakantsary mpitsikilo dia fisolokiana, nampidina azy aho ary nahazo faktiora mihoatra ny 30 euro nandritra ny 3 volana, hoy aho fa hafatra premium nalefan'ireo findaiko ireo. hosoka tanteraka
Mamaly an'i xabier
Edwarthendys dia hoy izy:
Fiarahabana liana aho liana hahafantatra ny fomba famoahana ny Tablet amiko hahafahako maka horonan-tsary amin'ny fotoana fakana sary tsy voafetra
Mamaly an'i EdwarThendys
Fiarahabana liana aho liana hahafantatra ny fomba famoahana ny Tablet amiko hahafahako maka horonan-tsary amin'ny fotoana fakana sary tsy voafetra sy tsy voafetra. Misaotra !!!!!
Advanced Launcher Xperia ho an'ny Android rehetra